NY MARINA TSY MBA MATY - rov@higa
17 Mars 2011, 15:58pm
Efa taonjato maro dia maro no nanomezan’Andriamanitra ny didy folo tamin’I Mosesy. Anisan’izany didy izany ny hoe:
“Aza manao vavolombelona mandainga hanameloka ny namanao.” Tsy vao izao akory izany no misy ny vavolombelona mandainga mba hanamelohana ny namana. Efa nisy , misy ary mbola hisy izany raha mbola tany koa ny tany.
Izany fomba izany no ampiasain’ny ny FAT matetika amin’izao fotoana izao. Tsy indray mandeha na indroa fa imbetsaka. Raha tsy ilaza afa-tsy ilay resaka Mamy RAKOTOARIVELO dia ireto misy zavatra tokony ho fantatra mikasika ilay famoriana mpanao gazety nataon’ny DST tamin’ny Talata 15 Martsa 2011 teo. Mazava fa tena tsy mitombina ny zavatra nasaina nambaran'ireo vavolombelona mandainga :
1- 1- Ilay rangahy avy ao amin’ny DST dia milaza tamin’ny teny fampidirana nataony fa baomba no amboarina ary izay no niantsoana an’I Tsimba. I Tsimba nefa avy eo nilaza fa tsy mahay an’izany fa informatique no hainy. (Zavatra goavana be toy izany ve dia olona tsy fantatra akory ny spécialtény no antsoin’ny olona toa an'i MAmy RAKOTOARIVELO?)
2- 2- Io Rangahy avy ami’ny DST io ihany no nilaza avy eo fa “CONVERTISSEUR” no nasaina nampananboarina. Nanamafy an’io ihany ko I TSIMBA sy ilay tovolahy hoe MISA fa convertisseur no nampanamboarina. ( Dia tena mihevitra ny gasy ho tsy mahay na inona na inona ve ny FAT? Betsaka ny manampahaizana Malagasy mahay “électronique” ary mahafantatra tsara ny atao hoe “convertisseur”. Tsy afaka hanaovana “commande” ny convertisseur izany hoe tsy mitombina ny fifandraisan’ny Convertisseur sy ny baomba voalazan-dry zareo. Tsy misy idiran’ny “convertisseur” ny “commande” fanapoahana baomba. Azo atao ny manazava ny fomba fiasan’ny converitisseur fa ny tokony ho fantatra fotsiny dia misy ny « convertisseur de tension » sy ny « convertisseur analogique numérique » (CAN) ary ny « convertisseur numérique analogique ». Azon’ny mpisolo vava an’i Mamy RAKOTOARIVELO anontaniana izy roalahy ireo hoe iza amin’ireo no nampanaovina azy. Ary asaina lazainy hoe ahoana no fomba ampiasaina azy mba hanaovana “commande “ hampipoaka baomba. Raha mamaly izy fa tsy fantany fa convertisseur fotsiny no nasaina nataony dia tsy mitombina izany satria nilaza izy fa nandramana ny fitaovana namboariny ary hita fa nety.
3- 3- Raha mila “convertisseur” dia 30 euros dia mahazo any andafy fa tsy mila mandoha 50millions izany.
4- 4- Nety ny fanandramana hoy i MISA, satria nipoaka kely ilay zavatra. ( Ny baomba tompoko tsy misy hoe mipoaka kely na mipoaka be fa rehefa mipoaka dia mipoaka. Raha tena natao izany ny fanandramana dia tokony ho fatin’ny baomba tao ireo rehetra izay tao anatin’ilay fiara nanaovana ny fanandramana.)
5- 5- Raha dinihana indray ilay filazana avy aty amin’ny emmoreg dia nilaza fa nisy “détonnateur primaire” sy “détonnateur secondaire” nampiasaina. Io no milaza fa tsy mitombina mihitsy ilay resaka “convertisseur” nolazain’ny DST. Araka izany ihany koa dia tsy mitombina ihany koa ny fisian’ny fil 150 m nolazain’I Camille Vital raha izay tokoa no fandehany.
6- Milaza ireo resaka mifamahofaho ireo fa “CINEMA” tokoa ity resaka baomba tao MASAY ity.
TSY MITOMBINA araka izany ny FANENDRIKENDREHANA atao amin’Andriamatoa Mamy RAKOTOARIVELO. Soa fa nanao “conference de presses” ry zareo tao amin’ny DST ka nampiharihary teo ny laingabeny.Tokony tehirizina iny horonan-tsary iny fa mamatotra ny DST ihany. NY Mpisolovava dia tokony hanamafy fa tsy ahafahana manapoaka baomba izany ny converisseur.
I Tsimba sy I Misa dia nasaina nanao VAVOLOMBELONA MANDAINGA HANAMELOHANA OLONA MADIO TANANA fotsiny ihany.
Mbola mampiseho ny maha mpanao tandrametaka azy ihany ny FAT amin’ity raharaha ity ary mihevitra ny olona ho bado tahaka azy. Mba zavatra hafa no tokony ho nolazaina fa tsy “CONVERTISSEUR” eh! Azo hatao ny manapoaka baomba « à distance » saingy fitaovana hafa fa tsy convertisseur no ampiasaina. I Richard baomba milaza ho spécialiste aza toa sanganehana.
Ary ilay nolazainy fa mpanapoaka baomba teo aloha dia nataon'ny filohana andrim-panjakana amin'izao fotoana (Raharinaivo io).
Mbola tafiditra ao anatin'io resaka LAINGA io ihany ny resaka 7febroary 2009 sy ny resaka Radion'ny gasy.